चिहानबाट खनेर निकालिएको श्रीमतीको अवशेषसँग १६ वर्षदेखि सँगै सुतिरहेछन् यी व्यक्ति (भिडियो) – Sanjal Nepal
Homeभिडियोचिहानबाट खनेर निकालिएको श्रीमतीको अवशेषसँग १६ वर्षदेखि सँगै सुतिरहेछन् यी व्यक्ति (भिडियो)
November 21, 2020 admin भिडियो 4818
भानको सन् १९७५ मा विवाह भएको थियो । निकै सानो उमेरमा विवाह भएका उनीहरुको ७ सन्तान भए । विवाह पछि यी दुईको प्रेम झाङ्गियो, उनीहरुको जीवन निकै खुसी साथ जिवन विताइरहेका थिए । ली भान सेनामा कार्यरत थिए । भानले सन् २००३ मा श्रीमतीको अचानक निधन भएको खबर पाए । उनी घर हानिए तर उनी घर पुग्नु अगावै श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गरेर गा’डिसकिएको थियो ।उनले श्रीमतीको वियोग सहन नसकेर केही समय श व गा डेको स्थानमै गएर सुत्न थाले । जव वर्षाको समय आयो उनले श व नजिकै खा’ल्डो बनाएर त्यहीँ सुत्न थाले । छोराछोरीले थाहा पाएपछि उनलाई त्यसो गर्न दिएनन् । त्यस पछि उनले चिहान खने, त्यसपछि श्रीमतीको हड्डी जम्मा गरेर ब्यागमा राखे । त्यसपछि उनले महिलाको आकृति दिइएको एउटा खोक्रो मूर्तीलाई सिमेन्ट, प्लास्टर, बालुवा, ग्लूको प्रयोग गरेर बनाए र त्यसभित्र श्रीमतीको अवशेष राखे । त्यसपछि त्यो मूर्तीलाई आफू सुत्ने बेडमा राखे । त्यस दिनदेखि आजसम्म उनी श्रीमतीको अवशेषसँगै सुतिरहेका छन् ।
नेट न्यूज भियतनामका अनुसार ली भान पछिल्लो दुई वर्षदेखि ह्विलचेयरमा छन् तर उनी प्रत्येक राती आफ्नी श्रीमती सँगै सुत्न घिस्रिएर भएपनि खाटसम्म पुग्छन् । उनले श्रीमतीको अवशेष राखिएको मूर्तीलाई सधैं सफा गर्छन् र मेकअप गरेर दिनको दुई पटक लुगा फेरिदिन्छन् ।छोराछोरीले जति भने पनि उनले त्यो क्रम छोडेका छैनन् । आफु घर बाहिर भएका कारण श्रीमतीलाई नयाँ लुगा लगाइदिने अवसर नपाएको उनलाई पछुतो छ । त्यसैले प्रत्यक दिन श्रीमतीलाई दुई पटक लुगा फेरीदिन्छन् । मेकअप गरेर राम्री पार्छन ।
November 11, 2020 admin भिडियो 3573
November 29, 2020 admin भिडियो 1799
झापाको गौरादह नगरपालिका-१ मा एक म’हिलाको ज्या’न लि’एको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले घ’टनामा संलग्न रहेको भन्दै उनका श्रीमानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दै थियो। ती महिलाका श्रीमानलाई पुर्पक्षका लागि जे’ल च’लान समेत गरिसकिएको छ। यो घटना
बुद्ध चित्तको खेतीले बनायो करोडपति, एउटै बोटबाट एक करोड ! भिडियो हेर्नुहोस !
December 26, 2020 admin भिडियो 1484
काभ्रे । काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–५ कानपुरका सिंह बहादुर लामाले पछिल्लो ६ वर्षदेखि बुद्ध चित्त मालाको खेती गर्दै आएका छन् । लामाका अनुसार उनले एउटै बोटबाट एक करोड रुपैयाँसम्मको माला बिक्री गरे । चीनबाट आउने ग्राहक
LEX 18 agenda conversation: Job club (544592)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515042)